JW Usoro Ihe Omume Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ Jenụwarị 11-17, 2016
2 IHE E MERE 33-36
Abụ nke 35 na Ekpere
“Jehova Na-agbaghara Onye Ji Obi Ya Niile Chegharịa”: (Nkeji 10)
2 Ihe 33:2-9, 12-16—Jehova gbaghaara Manase maka na o ji obi ya niile chegharịa (w05 12/1 21 ¶5)
2 Ihe 34:18, 30, 33—Ịgụchi Baịbụl anya na ịtụgharị uche na ya ga-enyere anyị aka ịna-eme ihe dị Chineke mma (w05 12/1 21 ¶10)
2 Ihe 36:15-17—O nwere ebe ọ na-eru Jehova akwụsị inwere mmadụ ọmịiko na ndidi (w05 12/1 21 ¶7)
2 Ihe 33:11—Olee amụma mezuru mgbe a kpụụrụ Manase laa Babịlọn? (it-1 62 ¶2)
2 Ihe 34:1-3—Gịnị ka anyị nwere ike ịmụta n’aka Josaya? (w05 12/1 21 ¶6)
Ọgụgụ Baịbụl: 2 Ihe 34:22-33 (Nkeji 4 ma ọ bụ ihe na-erughị ya)
Ozi Ụlọ n’Ụlọ: (Nkeji 2 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) Ihe ngosi. Jiri isiokwu Ụlọ Nche ọhụrụ zie mmadụ ozi ọma. Gwakwa onye ahụ ihe unu ga-atụle n’oge ọzọ.
Nletaghachi: (Nkeji 4 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) A ga-eme ihe ngosi otú a ga-esi gaa nletaghachi na nke onye ahụ natara Ụlọ Nche. Gwakwa ya ihe unu ga-atụle n’oge ọzọ.
Ọmụmụ Baịbụl: (Nkeji 6 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) A ga-eme ihe ngosi ebe e ji akwụkwọ Baịbụl Na-akụziri Anyị, isi nke 1, paragraf nke 6 na nke 7 amụrụ mmadụ ihe.
Abụ nke 77
Nchegharị Bara Uru: (Nkeji 10) Okwu okenye ga-ekwu. (w06 11/15 27-28 ¶7-9)
Na-agbaghara Ndị Ọzọ: (Nkeji 5) Okwu ndị na-ege ntị ga-etinyetụ ọnụ. A ga-ebu ụzọ kpọnye vidio bụ́ Bụrụ Enyi Jehova—Na-agbaghara Ndị Ọzọ. (Gaa na jw.org/ig, pịa ebe e dere IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI, pịa ỤMỤAKA ka ị hụ vidio a.) E lechaa ya, gwa ụmụaka ka ha kwuo ihe ha mụtara.
Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ: ia isi nke 6 ¶15-23, “igbe dị na peeji nke 57,” nakwa nke dị na peeji nke 58 (Nkeji 30)
Abụ nke 6 na Ekpere
Ihe Ndị Anyị Ga-amụ n’Ọmụmụ Ihe A Na-akpọ Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ Maka Jenụwarị 11-17, 2016
mailto:?body=Ihe Ndị Anyị Ga-amụ n’Ọmụmụ Ihe A Na-akpọ Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ Maka Jenụwarị 11-17, 2016%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D202016007%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe Ndị Anyị Ga-amụ n’Ọmụmụ Ihe A Na-akpọ Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ Maka Jenụwarị 11-17, 2016